Nhau - Iyo yepasi rose yekugadzira PMI yaive 57.1% muna Kubvumbi, ichipedzisa mbiri dzakateedzana kusimuka
Iyo yepasi rose yekugadzira PMI yaive 57.1% muna Kubvumbi, ichipedzisa maviri akateedzana kukwira
Sekureva kwedata rakaburitswa neChina Federation yeLogistics uye Kutenga musi wa6, kugadzirwa kwepasi rose PMI muna Kubvumbi kwaive 57.1%, kuderera kwe0,7 muzana poindi kubva mumwedzi wapfuura, zvichipedzisa mwedzi miviri zvichikwira.
Iyo yakazara index inoshanduka. Iyo yepasi rose yekugadzira PMI yadonha kubva mumwedzi wapfuura, asi iyo index yakaramba iri pamusoro pe50% kwemwedzi gumi yakateedzana, uye yanga iri pamusoro pe57% mumwedzi miviri yekupedzisira. Izvo zvave zviri padanho repamusoro mumakore achangopfuura, zvichiratidza kuti zvazvino pasirese kugadzirwa kwekukura kwehuwandu kune Zvisinei, maitiro ekutanga ekudzikama akatsiga haana kuchinja.
China Federation yeLogistics and Purchasing yakati muna Kubvumbi, IMF yakafungidzira kuti hupfumi hwepasi rose muna 2021 na2022 hwaizove 6% uye 4.4%, zvichiteerana, zviri 0.5 uye 0.2 muzana poindi dzakakwirira kupfuura zvaifungidzirwa muna Ndira gore rino. Kukwidziridzwa kwemajekiseni uye kuenderera mberi kwekuenderera mberi kwehupfumi hupfumi marongero munyika dzakasiyana siyana zvinongedzo zvakakosha zveIMF kuwedzera kukura kwehupfumi kutarisira.
Nekudaro, izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuchine zvimwe zvisaririra mukugadzirisa hupfumi hwenyika. Chinhu chikuru chinokonzeresa kuchiri kudzokedzana kwedenda. Kubata kudzora kwehosha kuchiri chinhu chinodiwa kuti hupfumi hwenyika husimukire. Panguva imwecheteyo, njodzi dzekukwira kwemitengo uye kukwira kwechikwereti kunounzwa neyakaenderera isinganetsi mutemo wezvemari uye kuwedzerwa kwemari kuri kuwandawo, kuva njodzi mbiri dzakavanzika mukati mekugadzirisa hupfumi hwenyika.
Kubva pakuona kwedunhu, hunhu hunotevera hunoratidzwa:
Kutanga, mwero wekukura kweindasitiri yekugadzira yeAfrica yakadzikira zvishoma, uye PMI yakadzika zvishoma. Muna Kubvumbi, iyo African yekugadzira PMI yaive 51.2%, iko kuderera kwe0,4 muzana poindi kubva mumwedzi wapfuura. Kukura kweiyo indasitiri yekugadzira yeAfrica kwakadzikira zvishoma kubva pamwedzi wapfuura, uye indekisi yakanga ichiri pamusoro pe51%, zvichiratidza kuti hupfumi hwemuAfrica hwakachengetedza hunyoro hwekupora. Kuenderera mberi kwekupararira kwekiriniki nyowani pneumonia yekudzivirira, kumhanyisa kwekuvakwa kwenzvimbo yekutengeserana yemahara pakondinendi ye Africa, uye kushandiswa kwakawanda kwehunyanzvi hwedhijitari kwakaunza rutsigiro rwakasimba mukugadzirisa hupfumi hwe Africa. Masangano mazhinji epasi rese anofungidzira kuti hupfumi hweSub-Saharan Africa zvishoma nezvishoma inopinda munzira yekudzoka. Chinyorwa chazvino che "Pulse of Africa" ​​chirevo chakaburitswa neWorld Bank chinofungidzira kuti mwero wekukura kwehupfumi hwesub-Saharan Africa inotarisirwa kusvika 3.4% muna 2021. Enderera kuumbiridza zvine mutsindo mukuvandudza kweketani yepasi rose yeindasitiri. uye kukosha kwecheni ndiyo kiyi yekusimudzira kweAfrica.
Chechipiri, kudzoreredza kwekugadzirwa kweAsia kwakatsiga, uye iyo PMI yakafanana nemwedzi wapfuura. MunaEpril, iyo yekuAsia yekugadzira PMI yaive yakafanana nemwedzi wapfuura, ichidzikama pa52.6% kwemwedzi miviri yakateedzana uye pamusoro pe51% kwemwedzi minomwe yakateedzana, zvichiratidza kuti kudzoreredzwa kwekugadzirwa kweAsia kwakadzikama. Munguva pfupi yapfuura, iyo Boao foramu yeAsia Musangano Wegore Negore yakaburitsa mushumo wekuti Asia ichave injini yakakosha yekugadzirisa kugadzikana kwepasirese, uye huwandu hwehupfumi hwenyika hunotarisirwa kusvika kupfuura 6.5%. Kudzoreredzwa nekusimba kwe dzimwe nyika dzichiri kusimukira dzinomiririrwa neChina kwakapa rutsigiro rwakasimba kuti hupfumi hweAsia hugadzikane. Iko kuenderera kwakadzika kwekudyidzana kwedunhu muAsia zvakare kunovimbisa kugadzikana kweAsia maindasitiri cheni uye cheni yekutengesa. Munguva pfupi iri kutevera, kuderera kwehosha muJapan neIndia kunogona kukanganisa kwenguva pfupi hupfumi hweAsia. Izvo zvinodikanwa kunyatso tarisa kune iyo kupararira, kudzivirira uye kudzora kwezvirwere munzvimbo mbiri idzi.
Chechitatu, kuwedzera kweiyo indasitiri yekuEurope yekugadzira yakaramba ichiwedzera, uye PMI yakasimuka kubva mumwedzi wapfuura. Muna Kubvumbi, iyo yekugadzira yeEuropean PMI yakawedzera ne1.3 muzana mapoinzi kubva pamwedzi wapfuura kuenda pa60.8%, yaive kuwedzera kwemwedzi nemwedzi kwemwedzi mitatu yakateedzana, zvichiratidza kuti mwero wekukura kwemaindasitiri ekuEurope wakaramba uchikurumidza zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura. , uye hupfumi hweEurope hwakaramba hwakachengetedza hunhu hwakasimba. Kubva pakuona kwenyika huru, iyo PMI yekugadzira yeUnited Kingdom, Italy, neSpain yakawedzera ichienzaniswa nemwedzi wapfuura, nepo PMI yekuGerman neFrance yakagadzirisa zvishoma kana ichienzaniswa nemwedzi wapfuura, asi inoramba iri padiki nhanho yepamusoro. Pakati paApril, kuwedzera kukuru kwezviitiko zvakasimbiswa zvepneumonia nyowani nyowani munyika dzakaita seGerman, Italy neSweden kwaunza matambudziko matsva mukugadzirisa hupfumi hweEurope. Tichifunga kuti kuwedzera kwechirwere chitsva chekorona kunogona kutungamira mukudzikira kweupfumi muEurope, European Central Bank nguva pfupi yadarika yakazivisa kuti icharamba ichichengetedza mutemo wakasununguka wemari uye icharamba ichikurudzira kumhanya kwekutenga chikwereti.
Chechina, kukura kweindasitiri yekugadzira muAmerica kwadzikira, uye PMI yadzokera padanho repamusoro. Muna Kubvumbi, iyo American yekugadzira PMI yaive 59.2%, kuderera kwe3.1 muzana poindi kubva mumwedzi wapfuura, zvichipedza kuenderera kumusoro kumusoro kwemwedzi miviri yakateedzana, zvichiratidza kuti mwero wekukura kweindasitiri yekuAmerican yekugadzira yakadzikira kana ichienzaniswa nemwedzi wapfuura. , uye indekisi ichiri pamusoro pe59%, zvichiratidza kusimukira kwehupfumi hweAmerica ichiri yakasimba. Pakati penyika huru, kukura kweiyo US indasitiri yekugadzira yakadzikira zvakanyanya, uye PMI yadzokera kumatunhu akakwirira. Chirevo cheISM chinoratidza kuti PMI weindasitiri yekugadzira yeUS akadonha nezvikamu zvina muzana kubva mwedzi wapfuura kuenda pa60.7%. Kukura kwehuwandu hwezvigadzirwa, kudiwa uye mabasa ebasa zvese zvakadzikira kubva mumwedzi wapfuura, uye mareferenzi ane hukama akadonha achienzaniswa nemwedzi wapfuura, asi akasara padanho repamusoro. Inotaridza kuti mwero wekukura weiyo US indasitiri yekugadzira yakadzikira, asi inochengetedza yekukurumidza kupora maitiro. Kuti irambe ichidzikamisa maitiro ekudzoreredza, United States inotarisira kugadzirisa bhajeti yayo uye kuwedzera mari isiri-yekudzivirira yakadai sedzidzo, kurapwa, uye kutsvagisa nekusimudzira kusimudzira simba rayo rese rehupfumi. Sachigaro weFederal Reserve ane chokwadi nezve kutarisirwa kwehupfumi muUnited States, asi akasimbisawo kuti kutyisidzira kwehutachiona hutsva korona kuchiripo uye kuenderera mberi kwekutsigira mutemo kuchiri kudikanwa.